भगवान श्रीकृष्णलाई सबैले विश्वास गर्नुका यस्ता छन् तथ्य « रिपोर्टर्स नेपाल
एजेन्सी, १३ मंसिर । भगवान बिष्णुको सबै अवतार मध्ये श्रीकृष्ण अवतार सर्वोच्च हो । श्रीकृष्ण देश, धर्म र सम्प्रदायभन्दा माथि सर्वमान्य महापुरुष हुन् । उनलाई विश्वभरका मानिसहरुले मन पराउछन् ।
१.भगवान नभएर मित्रः उनी भगवान नभएर प्रेमी र असल साथी हुन् । भगवान कृष्णः श्रीकृष्ण आफ्नो भक्तको लागि एक असल मित्र हुन् । कहिल्यै पनि उनी भगवान बनेनन् । उनले सधै मित्रतालाई नै महत्व दिए । उनका साथीहरु सुदामा, माधवदास र मीराका साथी मात्र बनेनन् एउटा गुरु पनि बने कृष्ण ।
२.जगन्नाथः श्रीकृष्ण १४ विद्या र १६ आध्यात्मिक र ६४ सांसरिक कलामा पारगंत थिए । त्यसैले उनलाई जगन्नाथ र जग गुरु जगदगुरु को रुपमा पनि कहलिए ।
३ पूर्णावतारः भगवान कृष्णको भगवान हुनु नै उनको शक्तिको स्रोत हो। उनी १० अवतारहरू मध्ये विष्णुको आठौं अवतार हुन्, जबकि उनी २४ अवतारहरू मध्ये २२ नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। उसले आफ्नो अघिल्लो जीवन सबै सम्झना थियो ।
४ चमत्कारः बाल्यकालमा उनले आमा यशोदा मैयालाई आफ्नो मुखमा ब्रह्माण्डको दर्शन दिएका थिए । उनले यमराजबाट सन्दीपनी ऋषिको मृत पुत्रलाई फेरि ल्याए। उनले मथुरामा कुब्जालाई तुरुन्तै निको पारे। इन्द्रको अहंकार तोड्नका लागि उनले कमिलाको औंलाले गोवर्धन पर्वत उठाए । धृतराष्ट्रको भेटमा द्रौपदीको टुक्राटुक्रा भइरहेको बेला उनले आफ्नो चमत्कारले द्रौपदीको साडीलाई लामो बनाएका थिए । बारबारिकको टाउको काटेर एक विशेष स्थानमा राखिएको थियो जहाँबाट उसले युद्ध हेर्न सक्छ। जयद्रथलाई मार्नुअघि उनले आफ्नो मायालाई सूर्यास्त हुनुभन्दा अघि राखेका थिए र उनलाई पुनरुत्थान गरेका थिए। उनले अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा जन्मेका छोरा परीक्षितलाई पुनर्जीवित गरे र अश्वत्थामालाई ३,००० वर्ष बाँच्ने श्राप दिए। यसरी उहाँसँग सयौं चमत्कारहरू छन्।
५ शरीरका विशेषताहरूः युद्धको समयमा श्रीकृष्णको शरीर चौडा र कठोर र नृत्यको समयमा नरम भयो। उसको शरीरबाट एउटा नशालु गन्ध निस्किरहेको थियो । तिनीहरूले आफ्नो गोप्य मिसनहरूमा यो गन्ध लुकाउन थाले। उनी योग र कलारीपट्टु विद्यामा निपुण भएकाले यस्तो भएको मानिन्छ ।
६ गीताको ज्ञानः उनी संसारको पहिलो व्यक्ति थिए जसले युद्धको मैदानमा ज्ञान दिए र त्यो पनि संसारभरि हजारौं भाषामा लेखिएको थियो र जुन आज पनि सान्दर्भिक छ। वास्तवमा गीतालाई मात्र शास्त्र मानिन्छ। उनको जीवन कथा श्रीमद भागवत पुराणमा वर्णन गरिएको छ। गीता बाहेक श्रीकृष्णले अन्य धेरै गीता लेखेका छन्। जस्तै अनु गीता, उद्धव गीता आदि । गीतामा उनले धर्म, ईश्वर र मोक्षको सत्य मार्ग बताएका छन्।
७. जन्म र मृत्यु रहस्य होः श्री कृष्णको जन्म रहस्य हो किनभने उनी जेलमा जन्मिएका थिए । त्यो पनि विष्णु आफ्नो ८औं अवतारको रूपमा २८ द्वापर भाद्रपदको कृष्ण पक्षको रात ७ मुहूर्तमा उनको जन्म भएको थियो । त्यो आरोहीमा शुभ ग्रहहरूको मात्र दृष्टि थियो। रोहिणी नक्षत्र र अष्टमी तिथीको संयोगले करिब १२ बजे अर्थात् शून्य कालमा जयन्ती नामको योगमा उनको जन्म भएको थियो । त्यसैगरी आफ्नो वासस्थानमा जानु पर्दा मृत्युलाई पनि रोजे । पौराणिक मान्यता अनुसार भगवानले त्रेतामा रामको अवतार लिएर बालीलाई लुकाएर बाण हानेका थिए । कृष्ण अवतारको समयमा भगवानले एउटै बालीलाई जरा नामक पक्षी बनाए र आफ्नो लागि त्यही मृत्यु रोजे । जुन उनले बालीलाई दिएका थिए।
८. विराट स्वरूपः उनले आफ्नो विराट रूप अक्रुरजीलाई, त्यसपछि उद्धवलाई, त्यसपछि राजा मुचुकुण्डलाई, त्यसपछि शिशुपाललाई, त्यसपछि धृतराष्ट्रलाई र त्यसपछि अर्जुनलाई ३ पटक विराटको रूपमा देखाए। कलियुगमा माधवदासलाई आफ्नो महान् रूप देखाएको बताइन्छ ।
९ किन सबैले तिनीहरूको पूजा गर्छन्ः श्री कृष्णलाई पुरीमा जगन्नाथ, द्वारकामा द्वारकाधीश, गुजरातमा श्रीनाथ, राजस्थानमा सावलिया सेठको रूपमा पूजा गरिन्छ। त्यस्तै, प्रत्येक राज्यमा तिनीहरूको फरक रूप छ।
१० लाखौं मानिसहरूले मोक्ष पाएः हजारौं नारी, द्रौपदी, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा र गोपीहरूले मोक्ष प्राप्त गरे । उनको अवधिमा श्रीकृष्णद्वारा उनीहरुलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उनले आफ्ना भक्तहरूलाई भक्तिमार्गद्वारा ज्ञान दिए । गोपीदेखि मीरा र सुदामादेखि सूरदाससम्म सबैले मोक्ष पाए ।
११ उनका भक्तहरू करोडौंः श्रीकृष्णका करोडौं भक्तहरू छन्। श्रीकृष्ण भक्तिको प्रचार प्रसार गर्ने इस्कोन जस्ता धेरै संस्थाहरू छन्।
आज माघ १५ गते शनिबार, यस्तो छ राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ १५ गते शनिबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २९
आज माघ १४ गते शुक्रबार, यस्तो छ आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ १४ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २८
माघ १३ गते बिहिबार, यस्तो छ आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ १३ गते बिहिबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २७
आज माघ १२ गते बुधबार, यस्तो छ आजको राशिफल
आज माघ ११ गते मंगलबार, यस्तो छ आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ ११ गते मंगलबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २५
आज माघ १० गते सोमबार, यस्तो छ आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ १० गते सोमबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २४
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ ९ गते आइतबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २३
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल माघ ८ गते शनिबार इश्वी सन २०२२ जनवरी २२